Ndị Galeshia 1 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Akwụkwọ Ozi E Degaara Ndị Galeshia 1:1-24
E nweghị ozi ọma ọzọ (6-9)
Ozi ọma Pọl ziri si n’aka Chineke (10-12)
Otú Pọl si ghọọ Onye Kraịst na ihe ndị mbụ o mere (13-24)
1 Mụnwa bụ́ Pọl onyeozi na-edetara unu akwụkwọ ozi. Ọ bụghị mmadụ ma ọ bụ ndị mmadụ họpụtara m ka m bụrụ onyeozi, kama ọ bụ Jizọs Kraịst+ na Chineke Nna,+ onye si n’ọnwụ kpọlite ya. 2 Mụ na ụmụnna niile mụ na ha nọ na-edetara unu, ọgbakọ ndị dị na Galeshia, akwụkwọ ozi: 3 Ka amara na udo si n’aka Chineke Nna anyị nakwa n’aka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst dịrị unu. 4 Kraịst nyere onwe ya maka mmehie anyị+ ka o wee napụta anyị n’oge* ọjọọ e nwere ugbu a+ otú Chineke anyị, bụ́ Nna anyị, chọrọ.+ 5 Ka otuto dịrị Chineke ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen. 6 O juru m anya na unu ji ọsọ na-ahapụ Onye si n’amara Kraịst kpọọ unu ma na-aṅa ntị n’ụdị ozi ọma ọzọ.+ 7 Ọ bụghị na e nwere ozi ọma ọzọ; kama e nwere ụfọdụ ndị na-akpatara unu nsogbu+ ma na-achọ imebi ozi ọma banyere Kraịst. 8 Ma, ọ bụrụgodị na onye ọ bụla n’ime anyị ma ọ bụ mmụọ ozi nke si n’eluigwe ezie unu ozi ọma karịrị nke anyị ziri unu, a ga-abụ ya ọnụ. 9 Ana m ekwu ya ọzọ ugbu a otú anyị kwuburu ya, sị, Onye ọ bụla nke na-ezi unu ozi ọma karịrị ihe unu nabatara, a ga-abụ ya ọnụ. 10 Ọ̀ bụ mmadụ ka m na-agbalị ugbu a ka m meta mma, ka ọ̀ bụ Chineke? Ka m̀ na-agbalị ka m mee ihe dị ndị mmadụ mma? Ọ bụrụ na m ka na-eme ihe dị ndị mmadụ mma, agaghị m abụ ohu Kraịst. 11 Ụmụnna m, m chọrọ ka unu mara na ozi ọma m ziri unu esighị n’aka ụmụ mmadụ;+ 12 n’ihi na anataghị m ya mmadụ. Ọ bụghịkwa mmadụ kụziiri m ya, kama ọ bụ Jizọs Kraịst kpugheere m ya. 13 Ama m na unu nụrụ àgwà m kpara n’oge gara aga mgbe m na-ekpe okpukpe ndị Juu,+ na m nọ na-akpagbusi ọgbakọ Chineke ike ma na-agbalị ka m bibie ya.+ 14 M nọkwa na-eme nke ọma n’okpukpe ndị Juu karịa ọtụtụ ndị ọgbọ m ná mba anyị, n’ihi na m na-anụrụ omenala nna nna m hà ọkụ n’obi nke ukwuu.+ 15 Ma mgbe Chineke, bụ́ onye mere ka m si n’afọ nne m pụta ma kpọọ m n’ihi amara ya,+ chọrọ 16 ka o si n’aka m kpughee Ọkpara ya, ka m wee zie ndị mba ọzọ ozi ọma banyere ya,+ e nweghị mmadụ* ọ bụla m gakwuuru ozugbo ka m jụta ya ihe ọ bụla. 17 Agbagoghịkwa m Jeruselem ka m jụta ndị bu m ụzọ bụrụ ndịozi ihe, kama m gawara Arebia, mechaa lọghachi Damaskọs.+ 18 Mgbe afọ atọ gachara, m gbagoro Jeruselem+ ka m hụ Sifas,*+ mụ na ya nọkwara ụbọchị iri na ise. 19 Ma ahụghị m ndịozi ndị ọzọ ma e wepụ Jems,+ nwanne Onyenwe anyị. 20 Ma ana m agwa unu n’ihu Chineke na ihe m na-edetara unu n’akwụkwọ ozi a abụghị ụgha ka m na-agha. 21 M mechara gawa n’ógbè ndị dị na Siria na Silishia.+ 22 Ma ọgbakọ ndị dị na Judia, bụ́ ndị ha na Kraịst dị n’otu, ahụtụbeghị m. 23 Naanị ihe ha na-anụ bụ: “Nwoke ahụ nke kpagburu anyị n’oge gara aga+ na-ezisazi ozi ọma banyere okwukwe ahụ ọ gbaburu mbọ ka o bibie.”+ 24 N’ihi ya, ha malitere ito Chineke n’ihi m.
^ Gụọ Nkọwa Okwu, “Oge a.”
^ Na Grik, “anụ ahụ́ na ọbara.”
^ A na-akpọkwa ya Pita.
Ndị Galeshia 1